मेलम्चीको भाका सरेको सर्‍यौ: नयाँ वर्ष होइन, असार पहिलो साता::kamananews
मेलम्चीको भाका सरेको सर्‍यौ: नयाँ वर्ष होइन, असार पहिलो साता
१४ फागुन, काठमाडौं । नयाँ वर्षमा काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने सरकारी बाचा फेरि झुठो सावित भएको छ । मेलम्ची काठमाडौंमा झर्ने भाका वैशाखबाट असारमा सरेको छ ।
फेरि एक पटक सरकारको कुरा पत्याउने हो भने ०७५ असार पहिलो सातासम्ममा मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको धारामा खस्नेछ । नयाँ वर्षको भाका सार्नुका विविध कारण देखाएको छ, सरकारले ।
सुरुङमार्ग निर्माण र फिनिसिङ तीव्र रुपमा हुन नसकेको तथा प्राविधिक तयारी नपुगेको विषयलाई सरकारले यसपटक नयाँ ‘डेडलाइन’ तोक्ने बहाना बनाएको छ । त्यसबारे मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई पनि जानकारी गराइसकेको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत् एउटा सुरुङ खण्डको ब्रेकथ्रु हुनै बाँकी छ । अहिलेको लक्ष्यअनुसार अबको ४० दिनमा मेलम्चीको सिन्धु–अम्बाथान खण्डको ब्रेकथ्रु हुनेछ ।
उक्त खण्डमा नरम चट्टान रहेकाले लक्ष्यअनुसार सुरुङ निर्माण हुन नसकेको आयोजनाको दाबी छ । ब्रेकथ्रु भइसकेका सुरुङ खण्डमा फिनिसिङको काम भइरहेको छ । ‘लाइनिङ’ भनिने उक्त कामअन्तर्गत् सुरुङभरि सिमेन्टेड ढलान गर्नुपर्छ ।
सिमेन्ट अभाव देखाउँदै दैनिक अढाइ सय मिटर फिनिसिङ गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन । फिनिसिङका लागि दैनिक दुई हजार बोरा सिमेन्ट आवश्यक पर्छ । सीमित कम्पनीको मात्रै सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकिने भएकाले आपूर्तिमा समस्या आएको आयोजनाका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
यो अवस्थामा मेलम्चीका सबै काम सकेर जेठ दोस्रो सातासम्म काठमाडौंको सुन्दरीजलमा पानी खसालिसक्ने नयाँ कार्यतालिका बनाइएको छ । जेठ अन्तिम साताबाट पानीको वितरण थाल्ने योजना बनाइएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडअन्तर्गत् परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी)का प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।
मेलम्चीको करिब २८ किलोमिटर सुरुङमध्ये अब सिन्धु–ग्यालथुङ खण्डको दुई सय २० मिटर खन्न बाँकी छ । हेडर्वक्समा पनि निर्माण चलिरहेको छ । अम्बाथानभन्दा केही माथि मेलम्चीको पानी थुनेर सुरुङमा हाल्ने योजना छ ।
पाँच मिटरभन्दा अग्लो बाँध बाँधेर मात्रै मेलम्चीलाई सुरुङमा हाल्न मिल्छ । बाँध निर्माणको काम तीव्र रुपमा भएको छैन ।
हेडर्वक्समै दुई वटा सुरुङ जोड्न ६० मिटर पाइपको अस्थायी संरचना निर्माण गर्न पनि बाँकी छ । हालसम्म भारतबाट पाइप आइपुगेकै छैन ।
मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं आउनेछ । पानी हालेको करिब ७२ घण्टामा सुरुङ भरिने अनुमान छ ।
यस्तै, सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्र भरिन ४८ घण्टा लाग्नेछ । त्यसपछि थप ४८ घण्टा थोक वितरण सञ्जालको सफाइमा लाग्ने छ । मेलम्चीबाट सुरुङमा पानी हालेको एक सातापछि उपभोक्ताको धारामा खसाउन सकिने ढकाल बताउँछन् ।
हाल काम भइरहेको सात सय ५० किलोमिटरमध्ये ६ सय ५० किमिभन्दा बढी पाइप बिछ्याइसकिएको छ । धुम्बाराहीदेखि कलंकीसम्मको चक्रपथ आसपास तीन सय किमि पाइप बिछ्याउन बाँकी छ ।
एडीबीले पाइपलाइन सञ्जालको सुदृढीकरण, ढल प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा पानी ट्यांकी निर्माणका लागि ८४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।
विभिन्न स्थानमा सात करोड ४५ लाख लिटर पानी अटाउने ट्यांकीहरु पनि निर्माणाधीन छन् । आठ वटा ट्यांकीको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । भक्तपुरको कटुञ्जेमा भने भर्खरै निर्माण शुरु भएको छ ।
सुन्दरीजलमा आठ करोड लिटरको पानी प्रशोधन केन्द्र बनाएर परीक्षण सकिएको छ । थप आठ करोड लिटरको प्रशोधन केन्द्रको परीक्षण पनि केही समयमै गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
२०७४ फागुन १४
फागुन ९, लन्डन । तपाईं गीत संगीत, अभिनय, फोटोग्राफी, मोडलिङ, एक्रोब्याट्स वा अन्य यस्तै ८० भन्दा बढि विद्यामा करिअर बनाउन चाहनुहुन्छ ? खुबी छ तर अवसर नपाएर अन्यौल भइरहेको छ भने एउटा अनलाइन प्लेटफर्म...
प्रहरी हवल्दार १ लाख ६० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ
६ फागुन, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, म्याग्दी मातहतमा रहेको प्रहरी चौकी पाखापानीका प्रहरी हवल्दार कुलबहादुर विसी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालको टोलीले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ...
जनावरका अंग चोरी गर्नेलाई कारबाही
ललितपुर, ५ फागुन । जनावरको डिएनए परीक्षण शुरु भएसँगै गैरकानूनी रुपमा जनावरका विभिन्न भागको अंग चोरी र बिक्री गर्नेलाई कारवाही हुन थालेको छ । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले आर्थिक वर्षको शुरुसँगै जनावरको डिएन परीक्षण शुरु...
कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउने
कालिकोट- कालिकोटको पलाता गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्कको अध्ययनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । पलाता गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्क नलिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएकोे हो...
ओली प्रधानमन्त्री भएलगतै चिनले दियो ३ करोड नेपालीलाई खुशीको खबर
४ फागुन २०७४, काठमाडौं । नेपाली प्राविधिकहरुलाई चीनमा रेलसम्बन्धी तालिम दिने तयारी शुरु भएको छ । गत २४ कात्तिकमै चिनियाँ पक्षले नेपाल चीन रेलमार्ग सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । नेपालसँग ५३ किलोमिटर लामो जनकपुर...
प्रदेश ६ मा ३ बजे मुख्यमन्त्रीको सपथ : मन्त्रीको अझै टुङ्गो न लाग्नुको कारण यस्तो
सुर्खेत– प्रदेश नं. ६ मा मुख्यमन्त्रीको सपथ शुक्रबार तीन बजेका लागि तय भएको छ । प्रदेश प्रमुखले बिहिबार मूख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश नंबर ६ का संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेपछि शुक्रबार दिँउसो...
दुई कोरिया, एक झन्डा र एकीकरणका सम्झना
सिओल – राजधानी सिओलबाट ५० माइल पर रहेको दक्षिण कोरियाली टोलीको राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्रमा शुक्रबार किम टेइक सोे प्योङच्याङ ओलम्पिकको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न आतुर थिए । उत्तरको शत्रु राष्ट्र भनेर चिनिएको दक्षिण कोरियामा ओलम्पिक...
प्रधानमन्त्री चयनसँगै सेयर बजारमा हरियाली, मनोवैज्ञानिक प्रभाव
३ फागुन, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरुभएसँगै सेयर बजारमा एकै दिन ३६ अंकले बढेर १४ सय २४ विन्दुमा नेप्से परिसूचक पुगेको छ । ‘नयाँ सरकार बनेपछि बजारले डेढसय बिन्दुसम्म बढ्छ भन्ने अपेक्षा लगानीकर्तामा...
प्रहरी संगठनमा रहेर गैरव्यावसायिक काम गर्ने जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ: आईजीपी अर्याल
फागुन, इलाम । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले प्रहरी संगठनमा रहेर गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलामको नवनिर्मित भवनको बिहीबार बिहान उद्घाटन गर्दै महानिरीक्षक अर्यालले भने, ‘गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप...
पत्रकार कार्कीलाई वडाअध्यक्षले दिए ज्यान मार्ने धम्की
३ फागुन, काठमाडौं । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पत्रकार महासंघ, ललितपुरका कोषाध्यक्ष एवं दैनिकी न्यूज डटकमका सम्पादक रामहरि कार्कीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । गत २८ माघमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर महाकांल गाउँपालिका-४ मा एमालेबाट निर्वाचित...